City River River - Mamaha ny taratasy rehetra avy amin'ny AZ online
Miala amin'ny reniranon'ny tanàna
Ahoana ny fanomezam-boninahitra aty amin'ny City Land River?
Templates sy vahaolana ho an'ny reniranon'ny tanàna
Ny sokajin'ny Land Land River miaraka amin'ny vahaolana naroso
Ny fitsipiky ny City Land River dia tsotra sy haingana manazava: mba hahafahanao milalao tanàna, tany, renirano mila 2 na mpilalao bebe kokoa. Ny mpilalao tsirairay dia mila taratasy tsy misy dikany amin'ny taratasy sy Dina-4 ary penina.
Ny lalànan'ny reniranon'ny tanàna momba ny lalao
Ao amin'ny taratasy dia mamorona latabatra ireo mpilalao. Ny fepetra ankapobeny dia voasoratra eo ambonin'ny latabatra.
Manomboka amin'ny tanàna, tany, renirano izy ireo ary avy eo lohahevitra hafa toy ny zavamaniry, asa, biby na lohahevitra tsy mahazatra toy ny sakafo, ny zava-pisotro, ny fiara, ny loka, ny fitaovana na ny loko. Ny lohahevitra dia tsy maintsy dinihina mialoha miaraka amin'ireo mpilalao hafa.
Mpilalao iray mangingina dia milaza ny abidia ao amin'ny A ka hatrany Z ary ny mpilalao iray dia tokony hilaza hoe "Stop" amin'ny fotoana iray. Ankehitriny, ny mpilalao rehetra dia tsy maintsy mahita ny tonon'ny sokajy mifanaraka amin'ny taratasy izay nofantenina. Ankoatra ny tanàna, ny tany ary ny renirano, dia mbola biby, zavamaniry, anarana ary asa no misy.
Any amin'ny faran'ity pejy ity dia manome vahaolana samihafa isika amin'ny lohahevitra miavaka kokoa toy ny mozika na cocktails.
Ilay voalohany nameno ilay teboka dia nilaza tanteraka hoe "mijanona" ary ny mpilalao rehetra dia tokony hametraka avy hatrany ny peniny. Manomboka mamaky ny sokajy voalohany ny olona voalohany. Ny teboka ho an'ny teny dia zaraina tahaka izao.
Raha misy olona maromaro manana teny mitovy ihany, dia manondro ny 5 tsirairay, raha misy olona iray manana teny, dia mahazo ny teboka 10 izy. Na izany aza, raha misy olona iray mitana ny teny rehetra ao anaty sokajy, dia manondro ny 25. Noho izany ny andalana tsirairay dia manaraka io fitsipika io. Ireo teboka dia nampidirina isaky ny boribory tsirairay ary amin'ny farany dia ny iray amin'ny ankamaroan'ny toerany no mpandresy.
Soso-kevitra avy amin'ny fampiharana: Indraindray dia misy fifandirana eo amin'ny mpilalao rehefa misy ny mpandray anjara, raha te ho haingana, dia soraty ireo teny tena tsy azo tsapain-tanana eo amin'ny vato. Koa satria afaka manaiky ianao fa fepetra momba ny reniranon'ny tanàna dia tsy maintsy afaka mamaky ireo fepetra ihany koa ny antoko fahatelo mba hanana vahaolana marina.
Templates mba haka sy hanonta amin'ny lalao lalao manaraka
Ny reniranon'ny tanàna dia mifototra amin'ny lohahevitra
City River Cheater sehatra fanampiny
Tanànan'ny renirano vohitra
Ny reniranon'i Madagasikara dia mamaha ny firenena
Ny reniranon'ny tanàna dia mamorona marika marika
Mpilalao gummitwist | Mialà fotoana malalaka